Canada waxay isticmaashay soo saaraha mashiinka mashiinka biraha ah
Somali Canada waxay isticmaashay soo saaraha mashiinka mashiinka biraha ah
Qalabka Aluminium iyo warqadda saqafka sare ee muuqaalka ayaa leh muuqaal qurux badan iyo midab cad. Waxaa si weyn loo isticmaalaa beerta, warshad, hudheelka, hudheelka, hoolka bandhigga, fasaxyada, dhismayaasha qadiimiga ah iyo villa casri ah.
Qalabka Aluminium iyo mashiinka saqafka ah ee muraayadda saqafka ah ayaa iibiya dhammaan aduunka oo dhan sida Guiena, Pakistan, Hindiya, Tusnia, Georgia. Waxay jecel yihiin derbiga aluminium iyo saqafka saqafka ee saqafka guriga.
Waraaqda Aluminium ee caadiga ah iyo saqafka saqafka ka hor inta aan la gashan Coil waa 1000mm, isticmaalka alaabta la isku qurxiyo oo la galiyey birta PPGI. Ka dib markii dukumiinti ay sameysey ballacan waa 840mm.
Qalabka Aluminium ee dhamaystiran iyo qaabka saqafka muraayadda ee mashiinka mashiinka mashiinka waxaa ka mid ah dekoiler, mashiinka wax lagu sameeyo, nidaamka xakamaynta kumbuyuutarka, xakameyaha internetka iyo miiska saaran.
WAXYAABAHA WAX-KA-HELI KA DHACAYA FADLAN KA HOR INTA AWOODDA
Waxaa la soo dhaweynayaa, haddii aanad ka helin waxyaabaha aad u baahan tahay ee boggayaga internetka, fadlan i tusi baahiyahaaga sawirada, halkan waxaanu naqshadeyneynaa kooxda in ay niyad-jebin doonaan oo ay ku siin doonaan hal jawaab oo qancin ah.